Iirhuluneli zase-US zamkela ukuvulwa kwakhona komda kubakhenkethi abagonyiweyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Iirhuluneli zase-US zamkela ukuvulwa kwakhona komda kubakhenkethi abagonyiweyo
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • Iindaba zaseMexico zokuPhula • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Iirhuluneli zase-US zamkela ukuvulwa kwakhona komda kubakhenkethi abagonyiweyo.
UMbutho weSizwe weeRhuluneli ulungele ukusebenza noLawulo ukuqinisekisa ukhuseleko oluqhubekayo kunye nempilo yabemi bethu ngelixa sisonyusa imisebenzi yezoqoqosho eza nokuhamba kunye norhwebo.
ISebe lezoKhuseleko lwaseKhaya e-US labhengeza ukuvulwa kwemida yase-US kubantu abagonyiweyo kwinyanga ezayo.
Iirhuluneli ezininzi zaseMelika zivakalise inkxalabo kuLawulo malunga nefuthe eliqhubekayo lezithintelo zokuhamba kwemida kwiindawo zabo.
Isibhengezo sangoLwesibini ziindaba ezilungileyo kwaye linyathelo elibalulekileyo ekudambiseni ifuthe lezoqoqosho kuluntu ngenxa ye-COVID-19.
Namhlanje, i Umbutho weSizwe weeRhuluneli (NGA) usamkele isibhengezo esivela kwiSebe lezoKhuseleko lwaseKhaya (DHS) ngomhla ukuvulwa kwemida yase-US yabantu abagonyelweyo ukuqala kwinyanga ezayo.
Ngeli hlobo, iRhuluneli ezininzi zivakalise inkxalabo kuLawulo ngeziphumo eziqhubekayo ze izithintelo zokuhamba kwiindawo zabo - uninzi lwabo bangabanini kunye nabasebenzi bamashishini amancinci, osapho anqwenela ukuqhubeka nomsebenzi.
Isibhengezo sangoLwesibini ziindaba ezamkelekileyo kwaye linyathelo elibalulekileyo ekudambiseni ifuthe lezoqoqosho kuluntu lwethu ngenxa ye-COVID-19. NGA sime sikulungele ukusebenza noLawulo ukuqinisekisa ukhuseleko oluqhubekayo kunye nempilo yabemi bethu ngelixa sisonyusa imisebenzi yezoqoqosho eza nokuhamba kunye norhwebo.
Ukuba kungakho utshintsho lwexesha elizayo, iiRhuluneli zibiza uLawulo ukuba lusebenze namazwe kunye nemimandla ukuqinisekisa ukuba isikhokelo somgaqo-nkqubo sithathela ingqalelo iimpembelelo zengingqi kuluntu.
Eyilwe kwi-1908, i Umbutho weSizwe weeRhuluneli (NGA) ngumbutho ohlukeneyo weli lizwe wooRhulumente abangama-55. Ngokusebenzisa i-NGA, iiRhuluneli zabelana ngeendlela ezilungileyo, zijongana nemicimbi enomdla kuzwelonke nakwilizwe kwaye babelane ngezisombululo ezitsha eziphucula urhulumente welizwe kunye nokuxhasa imigaqo-siseko yomanyano.